आइपिएल २०२० का चार उत्कृष्ट ओपनर जोडी | Hamro Khelkud
आइपिएल २०२० का चार उत्कृष्ट ओपनर जोडी
एजेन्सी – क्रिकेट टिमको खेल हो । त्यसैले एक खेलाडीको प्रर्दशनले मात्र जित सम्भव हुँदैन । तर एक खेलाडीको प्रर्दशनले धेरै प्रभाव र सहज बनाउन सक्छ ।
कुनैपनि टोलीको ओपनर चल्दा मध्यक्रमका ब्याट्सम्यानलाई समेत खेल्न सहज हुन्छ । ओपनर नचल्दा मध्यक्रमका ब्याट्सम्यानमा दबाब बढ्ने हुँदा खेल्न कठिन पर्छ । नयाँ पिच, नयाँ बल र विपक्ष्यको उत्कृष्ट बलरको सामना गर्न ओपनरलाई सहज भने हुँदैन । मध्यक्रम र तल्लोक्रमका ब्याट्सम्यान टोलीको आवश्यकता अनुसार खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले आफ्नो शैलीको क्रिकेट खेल्न नपाउन सक्छन् । ओपनरले बिना दबाब आफ्नो शैली र रणनीति अनुसार खेल्न पाउँछ । कुनैपनि टोलीलाई विशाल योगफल पूरा गर्न र बनाउन उत्कृष्ट सुरुवातको आवश्यक पर्छ । उत्कृष्ट सुरुवात विना विशाल योगफल पूरा भएको र बनाउन कठिन पर्छ ।
इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) २०२० सिजिन सेप्टेम्बर १९ देखि नोभेम्बर १० सम्म यूएईमा हुँदै छ । फ्रेन्चाइज टोलीहरु यूएई पुगि सकेका छन् । केहि खेलाडी क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेलेर आउने छन् । विश्वकै सर्वाधिक लोकप्रिय फ्रेन्चाइज लिग आइपिएल खेल्न खेलाडी पनि आतुर छन् । आइपिएलमा एकै खेलमा सर्वाधिक रन बनाउने कीर्तिमान विराट कोहली कप्तान रहेको रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरको नाममा छ ।
बेंगलोरले सन् २०१३ मा पुणे वारियर्सविरुद्ध २० ओभरमा ५ विकेटको क्षतिमा २ सय ६३ रन बनाएको थियो । उक्त खेलमा ओपनर क्रिस गेल र तिरकरत्ने दिलसानले पहिलो विकेटका लागि १३.४ ओभरमा १ सय ६७ रनको साझेदारी गरेका थिए । यस सिजनका चार उत्कृष्ट ओपनर जोडी जसले आफ्नो प्रर्दशन र साझेदारीमा टोलीको जित सहज बनाउन सक्छन् ।
४. रोहित शर्मा र क्विन्टन डी कक (मुम्बई इन्डियन्स)
चार पटकको च्याम्पियन मुम्बई इन्डियन्सका कप्तान रोहित शर्मा र क्विन्टन डी कक ओपनर हुन् । डी कक दक्षिण अफ्रिका सिमित ओभरका कप्तान र विकेटकिपर हुन् । दक्षिण अफ्रिका टोलीबाट उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै आएका डी ककले गतवर्ष मुम्बईलाई च्याम्पियन बनाउन उत्कृष्ट योगदान दिएका थिए । क्विन्टन बायाँ हाते ब्याट्सम्यान हुँदा मुम्बईलाई रणनितीमा पनि धेरै फाइदा पुग्छ ।
गतवर्ष डी ककले १६ खेलमा ५ सय २९ रनका साथ तेस्रो स्थानमा रहेका थिए । रोहित आइपिएल इतिहासकै तेस्रो सफल ब्याट्सम्यानमा पर्दछन् । गतवर्ष यी दुईले पहिलो विकेटका लागि गरेको उत्कृष्ट साझेदारी ९६ रन बेंगलोरविरुद्ध थियो । टि२० आई क्रिकेटमा चार शतक प्रहार गर्ने एक्लो ब्याट्सम्यान जुनसुकै सट खेल्न सक्ने क्षमता राख्छन् । यी दुई ओपनर जोडीलाई रोक्न विपक्ष्य बलरलाई कठिन पर्न सक्छ ।
३. शिखर धवन र पृथ्वी शा (दिल्ली क्यापिटल्स)
शिखर धवन र पृथ्वी शा दिल्ली क्यापिटल्सका प्रमुख रोजाईका ओपनर हुन् । अनुभवी धवन र युवा शा ले गत वर्षको आइपिएलमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका थिए । गतवर्ष धवनले ५ सय २१ रन बनाउँदै चौथो स्थानमा रहेका थिए । उच्च प्रर्दशन ९७ रन अविजित थियो ।
शाले ३ सय ५३ रन बनाएका थिए । उच्च प्रर्दशन ९९ रन थियो । यी दुई खेलाडीको उच्च प्रर्दशनको सहयोगमा दिल्लीले क्वालिफायर सम्म पुग्न सफल भएको थियो ।
२. क्रिस गेल र लोकेश राहुल (किंग्स इलेभेन पञ्जाब)
किंस इलेभेन पञ्जावका ओपनर लोकेश राहुल (केएल) र वेस्टइन्डिजका क्रिस गेल म्याच विनर ब्याट्सम्यान पर्दछन् । यी दुबै खेलाडीले एक्लै टोलीको जित सहज बनाउन सक्ने क्षमता राख्छन् । पछिल्लो समय भारतको सिमित ओभरमा विकेटकिपरको रुपमा उत्कृष्ट प्रर्दशनका स्थान बनाउँदै उच्च प्रर्दशन गर्दै आएका राहुलले आइपिएलमा पनि त्यहि लयलाईनै निरन्तरता दिने अनुमान गरिएको छ । अर्कोतर्फ गेल त टि२० क्रिकेटका राजानै मानिन्छन् ।
गतवर्ष गेल र राहुलले मुम्बईविरुद्ध १ सय १६ र चेन्नई विरुद्ध १ सय ८ रनको शतकीय साझेदारी गरेका थिए । राहुलले गतवर्ष १४ खेलमा १ शतक र ६ अर्ध शतक सहित ५ सय ९३ रन बनाउँदै सर्वाधिक दोस्रो रन जोड्ने ब्याट्सम्यान बनेका थिए । गेलले १३ खेलमा ४ सय ९० रन जोडेका थिए । उत्कृष्ट प्रर्दशन ९९ रन अविजित थियो । राहुलको लय पनि उत्कृष्ट रहँदै आएको छ ।
१. जोनी बेयरस्टो र डेभिड वार्नर (सनराइजर्स हैदराबाद)
इंग्ल्यान्डका ओपनर जोनी बेयरस्टो र अष्ट्रेलिया डेभिड वार्नर सनराइजर्स हैदराबादका ओपनर हुन् । यस सिजनका यी दुई ब्याट्सम्यान उत्कृष्ट ओपनर जोडी मानिन्छन् । गतवर्ष यी दुई जोडीले ओपनरका रुपमा चारपटक भन्दा माथि शतकीय साझेदारी गरेका थिए । गतवर्ष बेंगलोरविरुद्ध वार्नर र बेयरस्टोले पहिलो विकेटका लागि १ सय ८५ रनको साझेदारी गरेका थिए । जुन खेलमा वार्नरले १ सय रन र बेयरस्टोले १ सय १४ रनको शतकीय इनिङ खेलेका थिए ।
कोलकाताविरुद्ध १ सय ३१, १ सय १८ र राजिस्थान रोयल्सविरुद्ध १ सय १० रनको साझेदारी गरेका थिए । वार्नरले १२ खेलमा १ शतक र ८ अर्ध शतक सहित ६ सय ९२ रनका साथ शीर्ष स्थानमा रहेका थिए । बेयरस्टोले १० खेलमा १ शतक र २ अर्ध शतक सहित ४ सय ४५ रन जोडेका थिए । यी दुबैले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्दै उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै आएका छन् । आइपिएलमा पनि गतवर्ष जस्तै उत्कृष्ट प्रर्दशन र साझेदारी गर्न सक्छन् ।